Dutchtown နွေရာသီ Vibes • Downtown Dutchtown ရှိဇွန် ၅ ရက်
Dutchtown Summer Vibes တွင်တေးဂီတ၊ အစားအစာနှင့်သောက်စရာ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Downtown Dutchtown ဆိုင်များနှင့်ဖက်ရှင်ဆိုင်များအပြင်မြို့တစ်ဝှမ်းမှပေါ်လာသည့်စျေး ၀ ယ်သူများနှင့်အတူ ၀ ယ်ပါ။ ကနေကိုက်ဖမ်းပြီး မြို့ပြအိမ်နီးချင်းစားနပ်ရိက္ခာခန်းမစားသည် သို့မဟုတ်အခြားဒေသခံအစားအစာကုန်တင်ကားများနှင့်ရောင်းချသူများမှ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Neighborhood Innovation Centre ၌တီးဝိုင်းများနှင့် DJs များပါ ၀ င်မည် Earthbound ဘီယာ.
ကျွန်ုပ်တို့တွင် Dutchtown ရှိလူများကိုငှားရမ်းရန်ရှာကြံသောအလုပ်ရှင်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအပြင်နွေရာသီနှင့် ကျော်လွန်၍ အစီအစဉ်များကိုကမ်းလှမ်းသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများလည်းပါ ၀ င်လိမ့်မည်။
Downtown Dutchtown တွင်ကြီးမားသောနေ့ပြီးနောက်, ငါတို့နှင့်အတူညနေခင်းကိုပိတ်ပါ ရုပ်ရှင်ည 2021 ၏! အခမဲ့ပြဘို့အနေဝင်ချိန်မှာ Marquette ပန်းခြံသို့လာကြ Jurassic Park က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 22 ခြေလျင်ကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ!
Dutchtown Summer Vibes ကိုတင်ပြသည် ခရော -Butz အာမခံ ကကမကထ Earthbound ဘီယာ, အလုပ်အကိုင်ချိတ်ဆက်မှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုကုသပါ။
Marquette Park Movie Nights သည်ကမကထပြုပါသည် Dutchtown ရပ်ရွာတိုးတက်မှုခရိုင်, အလုပ်အကိုင်ချိတ်ဆက်မှု အကြမ်းဖက်မှုကို လူသာရင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့, မူရင်း Crusoe ရဲ့, စိန့်ဂျိုးဇက်အိမ်ရာစီမံကိန်း, စိန့်မာရိရဲ့အထက်တန်းကျောင်း, သောမတ်စ် Dunn သင်ယူရေးစင်တာနှင့် Tower Grove Neighborhoods Community Development Corporation.
မှာအဓိကပင်မမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ အိမ်နီးချင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုစင်တာ DJ သမားများ, တီးဝိုင်းများနှင့်ထို့ထက်ပို။ အဘို့အ Meramec နှင့် Compton ၏ထောင့်ပေါ်မှာ! သင်အဲဒီမှာရှိနေတုန်းငါတို့ထံမှသောက်စရာကိုယူပါ Earthbound ဘီယာ ရပ်တန့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ pop-up အစားအစာရောင်းချသူများထံမှရေစာတစ်ခွက်သောက်ပါ။
1pm: Bruiser ဘုရင်မ
3pm: Ztub အတွေ့အကြုံ
4pm: ထံမှလိပ်စာ ဒေသခံရွေးချယ်တင်မြှောက်အရာရှိများ ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်များစတိဗ် Butz နှင့် Rasheen Aldridge အပါအဝငျ
5pm: Lilshacko နှင့် Akim Brayan
6pm: 18and ရေတွက် (DJ သမား)
ငါတို့ကလူတွေကိုစာရင်းသွင်းနေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့အတည်ပြုထားတဲ့ပါ ၀ င်သူတွေစာရင်းပါ။ ထွက်လာနှင့်သူတို့ကိုထောကျပံ့!
Downtown Dutchtown သည်ထူးခြားသောဖက်ရှင်ဆိုင်များ၊ စပျစ်သီးနှင့်ခေတ်သစ်ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်အခြားလက်လီရောင်းချသူများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုး၏နေအိမ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မအောင်မြင်နိုင်သည့်တန်ဖိုးများဖြင့်တစ်မျိုးတည်းသောကမ်းလှမ်းမှုများစွာရှိသည်။ သင်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိနေစဉ်ဝင်ရောက်ရန်သေချာစေပါ။
Creative Expressions စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းများ
Black Rat Farms (အပင်များ၊ ချည်မျှင်နှင့်အလှကုန်များ)
Byanymeanss & Things (လက်ဝတ်ရတနာ၊ ပိုက်ဆံအိတ်နှင့် ဦး ထုပ်)
Enola လင်း (မူရင်းအနုပညာလက်ရာများ)
Killer Curves အဝတ်အထည် (အဝတ်အထည်များနှင့်လက်ဆောင်များကိုပြန်လည်ရောင်းချသည်)
MaTiff စီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ (အတိုင်ပင်ခံ ၀ န်ဆောင်မှု၊ အာမခံနှင့်အခြားအရာများ)
Ruministics (ဆပ်ပြာ၊ ရနံ့ကုထုံးနှင့်ဂျာနယ်များ)
မြင့်မြတ်သောသင်္ကေတများ (crystals နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ)
Selah အထည်အလိပ် (မျက်နှာသုတ်ပဝါများ၊ တင့်ကားများနှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူများ)
Urban Buddha Boutique (ကိုယ်ခန္ဓာစောင့်ရှောက်မှု၊ လက် ၀ တ်ရတနာ၊ အနှိပ်နှင့်အပို)
A & E သကြားလုံးနှင့်ရယူထားသော
ဝန်ထမ်းများ၏စိန့်လူးဝစ် ဦး စီးဌာန၏စီးတီး
South City ဆေးရုံ
Fighting HARD (Hit and Run မောင်းနှင်မှု)
တစ် ဦး မစ်ရှင်အပေါ်ကြယ်
လူရွှင်တော် -a- ပတ်ပတ်လည် Quita နှင့်အတူ (မျက်နှာဆေးသုတ်ခြင်းနှင့်ပူဖောင်းလိမ်ခြင်း)
အောက်မှာ Filed Dutchtown ဖြစ်ရပ်များ. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. DT2, ဒိန်းမတ်, Dutchtown CIDနှင့် Dutchtown ဖြစ်ရပ်များ. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် ဇွန်လ 2nd, 2021 .
ဒိန်းမတ် Dutchtown ဖြစ်ရပ်များ Dutchtown နွေရာသီ Vibes